Hamboarintsika ny lalàna mirefy 13 kilometatra ao an-tampon-tanàna an'Anjiajia. Aza matahotra ianareo fa tsy maintsy ho ampiakarintsika ny vidin'ny lojy aty amin'ny distrikan'Ambato Boeny, mba tsy ahafaty antoka anareo, rehefa tonga Filoha aho. Afaka 4 andro isika dia hifidy, ry Malagasy namako, reseo lahatra ny rehetra. Mila tanora manana vina no hitondra ny firenena.
ISIKA REHETRA HANAVOTRA AN'I MADAGASIKARA.